राहत वितरणको कार्य वडा नं. १ ले थाले अति विपन्न तथा दलित समुदायबाट -
राहत वितरणको कार्य वडा नं. १ ले थाले अति विपन्न तथा दलित समुदायबाट
प्रकाशित मिति: सोमबार, चैत्र २४, २०७६ समय: १२:१०:००
सुनसरीको रामधुनी नगरपालिका वडा नं. १ ले सोमबार अतिविपन्न तथा दलित समुदायबाट राहत स्वरुप खाद्यान्न वितरण कार्य शुरु गरेको छ । कोरोना भाइरसको प्रभावबाट बच्न सरकारले गरेको लकडाउनबाट दैनिक जिवनयापनमा समस्या परेका घरपरिवारलाई राहत कार्यक्रम ल्याएको छ । रामधुनीको विभिन्न वडाले राहत वितरणकार्य यस अगाडि देखी नै थालेता पनि सरकारको मापदण्डलाई आत्मसात गर्दै वडा नं. १ ले पूर्ण तयारीका साथ लगत संकलन गरी वडाबासीहरुलाई राहत वितरणको कार्य आजबाट थालेको हो । मोहनपुर र चियापुरमा रहेका अतिविपन्न तथा दलित बस्तीबाट थालिएको सो राहत वितरणको कार्यक्रम विभिन्न टोलविकास हुँदै आज जम्मा २३५ घरपरिवारलाई वितरण गरिएको हो ।
वडाले आज नौं वटा टोलविकास संस्थामा वितरण कार्य सम्पन्न गरेका छन् । टोलविकास संस्थाले अग्रिम रुपमा विपन्न परिवारको लगत उपलब्ध गराए बमोजिम टोल विकास संस्थाकै सहकार्यमा वितरण गरिएको हो । सोमबार मोहनपुर टोलविकास संं. मोहनपुर, रामजानकी टोलविकास संस्था चियापुर, सिंगापुर टोलविकास संस्था सिंगापुर, पश्चिमटोल शैनिमैनी, शिव मंदिर टोलविकास संस्था, सैनिमैनी, जुराइ धामी टोल, सरस्वती टोल सैनिमैनी, सिनुवारी पूर्वटोल, दुर्गा मंदिर टोल विकास संस्था सिनुवारीमा राहत वितरण गरिएको हो । २ सदस्य परिवारलाई १० किलो चामल, १ किलो दाल, १ लि. तेल, १ प्याकेट नुन र दुईवटा सावुन, त्यसतै ४ सदस्य परिवारलाई १५ किलो चामल, २ किलो दाल, १ लि. तेल, १ प्याकेट नुन र दुईवटा सावुन र ४ सदस्य भन्दा बढी सदस्य भएको परिवारलाई २० किलो चामल, ३ किलो दाल, १ किलो नुन, १ लि. तेल र २ वटा सावुन वितरण गरिएको छ ।
त्यसैगरी रामधुनी नपा वडा नं. ९ लेपनि अतिविपन्न तथा दलित समुदायका घरपरिवारहरुलाई आइतबार देखी राहत वितरणको कार्य थालेको छ । आइतबारबाट थालिएको सो राहत वितरण कार्यक्रम सितपुरका मुसहर वस्ती बाट थालिएको थियो । सितपुर र डुम्राहामा गरी वडाले आज सम्ममा २७६ घर परिवारलाई राहत वितरण गरिएको जनाएको छ । वडाले राहत वितरण सँगै लगत संकलनको कार्य पनि सँगसँगै गरिरहेको वडाध्यक्ष घनश्याम चौधरीले जानकारी दिनुभयो । लगत संकलन भइसकेका वस्तीहरुमा राहत वितरणको कार्यक्रम भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । सामाजिक दुरी कायम गरी वडाले खाद्यान्न तथा नुन, तेल, सावुन वितरण गरिरहेको छ । यस अघि वडाले प्रत्येक घरमा गएर मास्क वितरण गरेको थियो । त्यसैगरी रामधुनी नपा २ मा बिपन्न परीवारलाइ आइतबार देखी राहत बितरन कार्य थालेको छ । अती बिपन्न तथा मजदुर बर्गलाइ राहत वाडिएको वडाले जानकारी दिए ।